March 14, 2018 - नमस्ते खबर
नेपालको ईतिहासमा यो नै पहिलो अनौठो घटना, ७१ बर्षका बृद्धले गरे संबन्धविछेद
रोल्पामा ७१ वर्षको उमेरमा एक जोडीले आज जिल्ला अदालत रोल्पाबाट सम्बन्धविच्छेद गरेको छ। साविकको राङ्कोट गाविस–५ रोल्पाकी ७१ वर्षीया हस्तमाली वली र उनका ७१ वर्षीय श्रीमान् पञ्चबहादुर वलीबीच आज जिल्ला अदालत रोल्पाबाट सम्बन्धविच्छेद भएको हो। जिल्ला न्यायाधीश वासुदेवलाल श्रेष्ठको इजलासले वली दम्पतीको सम्बन्धविच्छेदको फैसला सुनाएको मुद्दा फाँटका डिट्ठा भीमराज ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला अदालत रोल्पाले मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं को देहाय २ बमोजिम सम्बन्धविच्छेदको फैसला गरेको हो। वृद्धा वलीले अंश माना चामल दाबी नगरी शुद्ध सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन्। हस्तमालीको राङ्कोट–४ कोरल निवासी स्व. दलसर रोकासँग…
जाली नोट छापेर छुट्टै धनी हुने सपना बोकेका साथिहरू परे प्रहरीको खोरमा
सुनसरी (धरान) — जाली नोट छापेर धरानमा ठगी गर्दै हिड्ने समूहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे छ । एक हजार रुपैयाँको जाली नोटबाट ठगिएको उजुरी परेपछि प्रहरीले बुधबार ६ जनालाईपक्राउ गरेकाे हाे ।पक्राउ पर्नेहरुमा धरान–१३ बस्ने राज राई, प्रकाश भण्डारी, विवश राई, दीपेश शाक्य, मिनकुमार राई र मनिष राई रहेका छन् । उनीहरुका साथबाट प्रहरीले लागूपदार्थ समेतबरामद गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले उनीहरुलाईनक्कली नोट छापिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार उनीहरुको साथबाट जाली नोट छाप्न प्रयोग गरिएको प्रिईन्क प्रिन्ट मेसिन कम्प्युटर, पैसा…
साउदीअरबमा २३ नेपाली सात महिना देखि विचल्ली नेपाल सरकारको बाटो हेर्दै
काठमाडौँ — साउदी अरवस्थित नेपाली दूतावासले बिचल्लीमा परेका २३ नेपालीलाई उद्धारको लागि टिकटको व्यवस्था गरिदिन वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष अनुरोध गरेको छ । ७ महिनादेखि बिचल्लीमा परेका ती कामदारलाई स्वदेश पठाउन कम्पनीले एक्जिट भिसा उपलब्ध गराएपछि दूतावासले टिकटका लागि विभागसमक्ष अनुरोध गरेको हो। ती कामदारलाई प्रिन्स इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसले साउदीस्थित इम्प्राटोर सोलुसन कन्ट्रक्टिङ कम्पनीमा पठाएका थिए। ‘कम्पनीका स्पोन्सर सम्पर्कमा थिएनन्। एजेन्ट मात्रै सम्पर्कमा थिए। निकै लामो प्रयासपछि कम्पनीले एक्जिट भिसा लगाइदियो,’ नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले भने, ‘टिकटका लागि म्यानपावरसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र पठाइदिन अनुरोध गरेका छौं।’ अलपत्र पर्ने अधिकांश…
अङ्ग्रेजीमा सोध्दा हिन्दीमा बोलेको ऋषि धमलाले गरे बाराक ओबामाको अन्तर्वार्ता लिने इच्छा (भिडियोसहित)
original video अन्य समाचार पनि पढ्नुहोला अङ्ग्रेजी मा सोध्हा हिन्दीमा बोलेको बिरोध गर्नेलाइ धमलाले गरे हमला ऋषि धमला भन्छन, ‘मलाई थाहा छ जहाँ हिन्दी बोल्ने र जहाँ अङ्ग्रेजी बोल्न भन्ने’ (भिडियो) काठमाडौं, 14 औं फेब्रुअरी, ऋषि धमला नेपालका टिभी पत्रकारहरू मध्ये एक हुन्। उहाँ साक्षात्कारको अनौठो शैलीको लागि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँका कडा र सिधा प्रश्नहरूको कारणले उनीहरूको प्रश्नहरू मानिसको अनुहार लाल बनाउँछ। उनको प्रसिद्ध शोमाहाला को हमला छ जो हिमालय टेलिभिजन मा टेलीभिजन गरिएको छ। यहाँ ऋषि धमला संग एक साक्षात्कार छ। विवरणहरू थाहा पाउन आफ्नो भिडियो हेर्नुहोस्।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफू भोलि पनि नियमितजस्तै कार्यालय जाने र ईजलाश तोक्ने स्पष्ट पारेका छन् । न्याय परिषद् सचिवालयले आफूलाई पदमा बहाल नरहेको भन्दै पत्र काट्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो । उनले भने,“ऋषिजी म दोहोर्याएर भन्छु, न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन, परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार छैने र त्यो गैरकानुनी हो ।” पत्रकार ऋषि धमलासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पराजुलीले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले भेनका छन,“त्यो पत्रको कुनै महत्व पनि छैन, सचिवालयलाई क्षेत्राधिकार पनि छैन, त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।” न्याय परिषद्का…
Breaking News: गौशालामा गोली चल्यो, गुण्डा नाइके गणेश लामा पक्राउ
काठमाडौं गौशालास्थित होटल पशुपति भिजनमा गोली चलेको छ । लगत्तै, घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले गुण्डा नाइके गणेश लामालाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई एउटा पेस्तोल र ६ राउण्ड गोलीसहित पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डिएसपी मोहन थापाले पुष्टि गरे । यद्यपि, गोली कसलाई लाग्यो भन्ने बारे प्रहरीले खुलाइएको छैन । लामालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान थालिएको छ । लामा यसअघि काभ्रेको क्षेत्र नंं १ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका लागि उम्मेदवार बनका थिए । यद्यपि, उनी नेकपा एमालेका उम्मेदवार चन्द्र लामासँग पराजित भएका थिए । उनीविरुद्ध अपरहण, फिरौती र…
भोलिदेखी २० वर्ष पुराना सवारी गुड्न नपाउने, चलाए हदैसम्मको कारवाही
सरकारले चैत १ गतेदेखि देशभरबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी गुड्न नपाउने नियम लगाएको छ । बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात चैत १ गतेपछि पनि गुडेमा जफत गरी लिलाम गर्ने तयारी गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले २० वर्ष पुराना सवारी चैत १ गते बिहीबारदेखि गुडे समातेर राखिने राससलाई जानकारी दिए । २० वर्ष पुराना सवारी गुडाएमा समातेर कानूनी कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । फागुन मसान्तसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ विभागमा बुझाउन सवारी…
२० लाख ऋण लिएर छोरीलाई पढाउन बंगलादेश पठाएकी उर्मिला प्रधान भावुक हुँदै भन्छिन,’सबै खत्तम भयो’(भिडियो सहित हेर्नुहोला)
बंगलादेशको विमान दुर्घटनामा आफ्नो २४ वर्षीया छोरी गुमाएकी उर्मिला प्रधान बुधबार विस्मित देखिन्थिन्। उनी विगत दुई दिनदेखि छोरी श्वेता थापाको शव बुझ्न महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालको फोरेन्सिक ल्याब परिसरमा धर्ना दिएर बसेकी छन्। तर, बुधबार एकाएक श्वेताको शवमा उनका पिताले दाबी गरेपछि उर्मिला अचम्मित भइन्। थापा थरका ती व्यक्तिसँग उर्मिलाको धेरै अगाडि सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। थापा छोरी श्वेतालाई उर्मिलासँगै छाडेर छुट्टै बस्दै आएका थिए। श्वेतालाई हुर्काउने र पढाउने सबै काम आमा उर्मिलाले गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो छोरीलाई चिकित्सक बनाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ललितपुर शाखाबाट २० लाख रुपैयाँको शैक्षिक कर्जासमेत लिएको…
सुखद खबर: विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका एमबीबीएस विद्यार्थी समीरा ब्यञ्जनकार खतरा मुक्त, अहिले सामान्य अवस्थामा !
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार बंगलादेशको यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा परी बंगलादेशबाट एमबीबीएस सकाएर नेपाल फर्किएका १९ जना बिद्यार्थीहरु मध्ये १३ जनाको ज्यान गएको भन्ने समाचार आएको थियो । उक्त समाचारमा एमबीबीएसको बिद्यार्थी समीरा ब्यञ्जनकारको पनि मृत्यु भएको समाचार आएको थियो । तर मृत्यु भएको भनिएका समीरा ब्यञ्जनकार जिवितै रहेको समाचार आएको छ । समीरा ब्यञ्जनकारको अहिले सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको फेसबुकबाट सुनिल ब्यञ्जनकारले जानकारी दिनुभएको छ । सुनिल ब्यञ्जनकारले फेसबुकमा एउटा स्टाटस सार्वजनिक गर्नु हुँदै समीरालाई श्रद्धाञ्जलि प्रकट नगरिदिन…
प्रधानमन्त्रीले भने- न्यायालयका बारेमा म एउटाले नबोलेर के हुन्छ? गोपाल पराजुलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : प्रमाणपत्रमाथि प्रमाणपत्र, के गरेको यो ? Posted by Setopati on Wednesday, March 14, 2018 अन्य समाचार पनि पढ्नुहोला न्याय परिषदको बैठक बोलाउने तयारीमा गोपाल पराजुली न्याय परिषदका सचिवालयका सचिवले जारी गरेको पत्रप्रति प्रधानन्यायाधीशले असहमती जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको उच्च स्रोतका अनुसार पदमुक्त गरिएका भनिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्याय परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन् । आज अपरान्ह राष्ट्रपतिलाई सपथ गराउनु केही मिनेट अघि मात्र न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले पराजुलीको उमेरको हद साउन…